Iflethi okanye indlu ekwicomplex esandul 'ukuhonjiswa ekwicomplex ekwicomplex ek - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex esandul 'ukuhonjiswa ekwicomplex ekwicomplex ek
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguEdel
Iphupha lolwandle kumphezulu webhakethi lolwandle. Yakhiwa ngo-1895, yenye yezindlu ezisindileyo emlilweni, kwaye le flethi yagqitywa ngo-2019. Apha ungonwabela ukubona iindawo ezintle, ii-sunsets ezimnandi, ulwandle kunye neentlanzi ngaphandle nje kweefestile. Le ndawo inobuntu obungathethekiyo kwaye ikwindawo ephakathi, kodwa ikude kwiindawo ezingaqhelekanga.
Luhambo olumnandi lwemizuzu eyi-5 oluya embindini wedolophu. Kwisakhiwo uza kufumana nebhokisi yobuncwane bevenkile yezinto zakudala kunye nevenkile yokutyela.
Iflethi ikumgangatho wesine, kodwa iindonga zezitepsi zigcwele imizobo emihle kunye neefoto zokukuzonwabisa xa uphezulu. Iflethi inamagumbi okulala ayi-3, ineebhedi eziyi-2 ububanzi obuziisentimitha eziyi-120 kunye nebhedi enobubanzi obuziisentimitha eziyi-180.
iibhedi ezincinci eziyi-2
5.0 · Izimvo eziyi-53
Molovegen yindawo entle yasekuhlaleni. Apha uza kufumana imyuziyam yokuloba kwaye ungahamba ngephenyane ukuya kwinqaba enesibane phezulu. Indawo yokuphosa amatye ambalwa yindawo yemidlalo yeqonga apho unokuzonwabisa khona uze usele kamnandi.
Umbuki zindwendwe ngu- Edel
Umnini-mhlaba uhlala kumgangatho ongezantsi.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ålesund